Vidio: Kevin Spacey na-ekwu maka ihe atọ gbasara akụkọ akụkọ | Martech Zone
Akụkọ akụkọ bụ ọnụma niile ugbu a na azụmaahịa ọdịnaya ọdịnaya. Ọ bụkwa isiokwu nke ụka na Ọdịnaya Ọdịnaya Ọdịnaya 2014 ebe Kevin Spacey mere isi okwu… na ịkọ akụkọ. Maazị Spacey jere ije n'okporo ụzọ atọ nke nnukwu akụkọ. Agbakwunyere m okwu m ebe a - ị nwere ike ịlele vidiyo nke isi okwu ya (nke edeziri nke ọma iji bepụ mkpokọta nke ọpụpụ).
Nsogbu - Azụmaahịa gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe ngwọta maka ihe ọ bụla nwere agba dịka ederede Kevin Spacey, mana enwere esemokwu ị na-achọ idozi. Are bụ ihe ngwọta nye nsogbu na nsogbu ọ bụla bụ esemokwu. Ọ nwere ike ịbụ esemokwu nke ịchọpụta arụmọrụ, nke ịchụso obi ụtọ, ịtụle nke ọma ozi. Kekọrịta esemokwu n'etiti ndị na-ege gị ntị!
izi ezi - soshal midia bu uzo di nkpa nke izi ezi nke ịkọ akuko n'uwa ahia. Have nwere ohere ịnye iji ikpe, ịgba akaebe, ndị ọrụ, yana - n'ezie - njirimara gị iji mepụta akụkọ ahụ ma gwa ya nke ọma. Akụkọ na-enweghị ihe odide inu ara… chee echiche banyere nke ahụ!
Ndị na-ege ntị - kedụ ndị ị na-eru, ebee ka ha nọ, kedu ka ị si erute ha? Na-akọ akụkọ gị na ndị mgbaasị ha na-eri? Na-akọ akụkọ gị ebe ha na-agakarị? You na-eke akụkọ ahụ n’ụzọ ga-eme ka mmetụta gị na ya wee jikọta ha? Mara ndị na-ege gị ntị ga-enyere gị aka ịmezi akụkọ gị nke ọma!
Ikekwe ihe kachasị mkpa Maazị Spacey kwuru na mmechi, bụ nke a:
Ma cheta… ọ bụ ndị na-etinye ihe ize ndụ na-akwụghachi ụgwọ.
Akụkọ ndị pụtara ìhè bụ ndị dị iche iche, ndị na-adọta uche, ndị na-enwe mmetụta mmetụta uche, ndị na-ekere òkè. Nke ahụ ọ bụ akụkọ ị na-ewepụta?
Tags: ụwa ahịa ọdịnayakeven spaceykeynoteịkọ akụkọ
Dị ka apụl na chiiz, Email na Social Media Marketing
Ise Pụrụ Iche Mejọọ Email Gị Mmemme Mmemme Kwesịrị Zere